Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Jet Airways 2.0: Ny fiaramanidina vaovao
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana India • fampiasam-bola • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Teraka indray ny Jet Airways
Izay vaovao tsara rehetra eo amin'ny sehatry ny seranam-piaramanidina any India dia mitaky fankalazana. Ka ny resaka fifohazan'ny Jet Airways taorian'ny namorenany elany tahaka ny tamin'ny volana aprily 2019, dia hita ho mari-pamantarana tsara sy ekena tokoa.
Ny endrika vaovao an'ny kaompaniam-pitaterana dia tonga amin'ny alàlan'ny fifohazana amin'ny alàlan'ny fatiantoka.
Ny Jet Airways tany am-piandohana dia niorina tao Mumbai, ary ny fahaterahana indray dia hahita azy miorina any New Delhi.
Izy io dia mikasa ny hanomboka ny asa aman-draharaham-pitaterana an-tariby fohy an'ny mpitatitra amin'ny tapany faharoa amin'ny taona ho avy miaraka amin'ny mety hisian'ny sidina iraisampirenena any aoriana.
Ny avatar vaovao - na ny teraka ao amin'ny vatana vaovao indray - dia mety hitranga raha vantany vao amin'ny herintaona, 2022, na dia amin'ny ambaratonga maotina aza.
Ny endrika vaovao an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia tonga amin'ny làlana hafa tsy nanandrana aloha. Jet Airways, indray mandeha anarana malaza sy hajaina, dia hiakatra amin'ny lanitra amin'ny alàlan'ny lalan'ny fifohazam-panahy.
Amin'ny voalohany dia ho mpitatitra entana an-trano ihany izy fa amin'ny faran'ny taona ho avy dia mety hisidina any ivelany koa ny Jet Airways 2.0. Ny fitantanana vaovao dia tsy nilaza ny antsipiriany momba ny drafitra ho an'ny asa iraisam-pirenena, na izany aza, ny loharanom-pahalalana dia nanondro fa afaka mijery ny sehatry ny Golfa ny seranam-piaramanidina amin'ny famerenany indray.
raha ny Jet Airways tany am-boalohany dia niorina tao Mumbai, ny fahaterahana dia hahita azy miorina any New Delhi. Hanohy hanana fisian'ny matanjaka sy manan-danja ao Mumbai ihany koa izy io, ny fototra niandohany.
Hafa ihany koa ny lamin'ny fananana. Naresh Goet no niantso ny fitifirana, fa ankehitriny kosa ny consortium tarihin'ilay mpandraharaha Indiana monina any UAE, Murari Lal Jalan, no ho eo amin'ny seza fiandrasana. Jalan, izay mitarika ny Jalan Kalrock Consortium (JKC) dia nahazo ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Indiana Air Jet.
Nilaza ny tompon'andraikitra ambony fa mikasa ny hanomboka fotoana fohy ny asa aman-draharaham-pitateran'ilay kaompaniam-pitaterana amin'ny tapany faharoa amin'ny taona ho avy.
Ny loharanom-baovao dia milaza fa am-boalohany, hanana 50 ny fiaramanidina vaovao ao anatin'ny 3 taona, izay antenaina hitombo ho 100 ao anatin'ny 5 taona.
Raha ampiharina io drafitra io dia samy ho faly ireo mpanidina sy ireo mpandraharaha ary hijery tsara ny fivoaran'ny kaompaniam-pitaterana indray.
Ny fanitarana ny fahaizan'ny rivotra dia ho fampandrosoana lehibe, indrindra satria ny famoahana ny Air India dia mbola mitaky fotoana bebe kokoa.
Nilaza ny zotram-pitaterana an'habakabaka fa efa nanakarama mpiasa maherin'ny 150 izy ary mitady mpiasa 1,000 XNUMX an-tsambo indray amin'ny taom-piasana ankehitriny. Ny fanakaramana dia ho amin'ny dingana an-dàlana ary ho any amin'ny sokajy rehetra.